Roberto Carlos: Uma Joogo Real Madrid Sidii Aan Heshiis Ula Gaari Lahaa Cristiano Ronaldo - jornalizem
Roberto Carlos: Uma Joogo Real Madrid Sidii Aan Heshiis Ula Gaari Lahaa Cristiano Ronaldo
Roberto Carlos ayaa u xaqiijiyey taageerayaasha Real Madrid in sababaha uu u joogo magaalo madaxda Spain aysan ahayn in uu heshiis la saxiixdo Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa lala xiriirinayay in laga yaabo inuu ka tago Madrid kooxda ka dhisan Ruushka ee Anzhina waxa ay ka mid tahay kooxha awood dhaqaale u leh inay dalbadaan.
Si kasta ha ahaatee,agaasimaha isboortiga ee Anzhi oo hore ugaga mid ahaa kooxda Real Madrid oo hadda ku sugan Spain ayaa waxaa uu si cad u sheegay inuusan u imaan in ciyaaryahanka reer Portuqal uu kala hadlo arrimo ku saabsan sidii uu ugu soo wareegi lahaa kooxda Anzhi.
“Dad badan ayaa waxa ay is weydiinayaan goorta aan u iman doono Cristiano laakiin Maya,”ayuu u sheegay daaficii hore ee dhinaca bidix LigaBBVA.
“Cristiano halkan ayuu ku faraxsan yahay balse waxaan ka fekerayaa ciyaaryahano kale oo heerar kala duwan leh xilli ciyaareedka soo socda.
“Halkan waxaa ka jira horyaalka ugu wanaagsan caalamka iyo tabarayaasha iyo ciyaaryahanada ugu wanaagsanba.
“ Kooxda Anzhi waxay raadineysaa ciyaaryahano waayo aragnimo leh. Waxaan qorsheyneynaa in aan ka dhigno Anzhi naadi can ah oo weliba leh ciyaaryahano heer sare ah.
Carlos oo ka hadlay xaalada uu ku sugan yahay Ronaldo ayaa yiri: “Haddii uusan Cristiano uusan u dabaaldegeyn goolasha, annaga oo ah dadka daawanaya ayaa u dabaaldegeyna. Ma aha inuu walwalo dadku si weyn ayay u jecel yihiin. “Waa inuu sii wadaa howshiisa, yuuna walwalin, mashaakilka waa la xallin doonaa. Cristiano waa qof cajiib ah.”
Carlos ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay aragtidiisa tababare Jose Mourinho.“Madrid waxay leedahay tababare weyn. Dad badan ayaa dhaliila, balse isagu weli wuu guuleysanayaa. Sanadkan wax muhiim ah ayay gaari karaan. Kooxdan iyo tababarahooda waxay samayn karaan wax wanaagsan.”